I-Tis Isizini, I-Google Doodle igubha ukuqala kwamaholidi - ITS
Isikhathi Sonyaka, i-Google Doodle igubha ukuqala kwamaholide
'Isikhathi Sonyaka, iGood Doodle igubha ukuqala kwamaholide'
Ngenkathi, i-google income ukuqala konyaka kaKhisimusi nonyaka omusha we-2016 Christmas.
I-NEW DELHI: I-Christmas, Izikhathi Zonyaka Omusha zilapha futhi i-Google idumisa isenzakalo esiyinhloko nge-doodle yayo. I-Google ihambise i-doodle yayo yokuqala 'Tis inkathi! ukuqeda ukuqala kwesizini seholide.
I-Google Doodle igubha ukuqala kwamaholide
'Ngenkathi yomsindo! Isikhathi sasebusika sithwala amasiko ahlukahlukene, nokho abambalwa abakudala noma abajabule njenge-caroling. Ukubuyela emuva emininingwaneni eminingi yeminyaka, izingoma zokuqala zazingxenyeni ezithile, futhi zabelwana ngezingcingo ezihamba phakathi kwamadolobha. Kwakungakaze kufike phakathi kwe-1800 ukuthi isenzo sokugcoba njengoba siyazi kahle, sisakaze i-crosswise phezu kwe-England ne-Western Europe.
Phakathi nalesi sikhathi, imiphakathi yasemadolobheni yaqala ukusiza ngaphandle kwama-symphonies owadlala izingoma zabantu ukuze bahlale nabo njengoba begijima.
'Ngenkathi! Ngokufanayo iqoqo lamaculo kaKhisimusi ngu-Olivia Newton-John noVince Gill.
I-Doodle yanamuhla ihlanganisa iqembu elijabulisayo labahlabeleli, elinomdlali wesigcawu ehlezi eqinile ngomzuzu wakhe. Ngesinye isikhathi lapho umbukeli ehlola igundane lakhe phezu kwe-doodle enhle, ubona umlayezo othi 'Isikhathi Sonyaka bese uthayipha kuwo uthatha ikhasi elibukeka ukuze uthole umbhalo onjalo ofanayo.
Ngokufanayo okufana njalo, manje singalindela ukuthi i-Google izoveza enye idokodo ngosuku, okusho nsuku zonke yenkathi ye-bubbly.
UDisemba 23 ibhekwa njengosuku oluyinhloko lonyaka kaKhisimusi olulandelwa uKhisimusi noNyaka Omusha.
Njengoba silindele amanye ama-doodle ama-bubble kuleli sonto, nithanda ukuthi wonke umuntu ajabulele uKhisimusi nezimo ezingavamile ezizayo.
Inkantolo Ephakeme yaseDelhi: Abaphathi beqembu le-WhatsApp abanelungelo lokusebenzisa izinto